အောင်နိုင်သူ ရဲ့ အိမ်အပြန်လမ်းဖြစ်လာမလား (သို့) ဂနာဘရီကို အာဆင်နယ် ခေါ်နိုင်စွမ်း ရှိမရှိ? – Gunners' Side
အောင်နိုင်သူ ရဲ့ အိမ်အပြန်လမ်းဖြစ်လာမလား (သို့) ဂနာဘရီကို အာဆင်နယ် ခေါ်နိုင်စွမ်း ရှိမရှိ?
ဘေယန်မြူးနစ်နဲ့ စာချုပ်တစ်နှစ်သာ ကျန်တော့တဲ့ ဂနာဘရီကို အာဆင်နယ်၊ ဘာစီလိုနာ၊ ရီးရဲတို့က စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ ဂနာဘရီကတော့ စာချုပ်သက်တမ်း မတိုးတော့ဘဲနဲ့ လာမယ့်အပြောင်းအရွှေ့မှာ ထွက်ခွါတော့မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအရဆိုရင်တော့ ရီးရဲမက်ဒရစ်က တောင်ပံကစားသမား ထပ်မံခေါ်ယူဖို့ မရှိဘူးဆိုကာ လက်ရှောင်ခဲ့တာကြောင့် အာဆင်နယ်အနေနဲ့ သူတို့ခြံပေါက်ကစားသမားဟောင်းကို ပြန်လည်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးသာသွားခဲ့ပါတယ်။
ကစားသမားဟောင်းတွေ အိမ်ပြန်လာတယ်ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတိုင်းက လှတာမဟုတ်ပေမယ့် ၊ ပရိတ်သတ်တိုင်းလိုလိုကတော့ မျှော်လင့်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါက ဘယ်အသင်းအားပေးတဲ့ပရိတ်သတ်မဆိုပါ။
အာဆင်နယ်ကနေ အာဆင်ဝင်းဂါးလက်ထက် ၂ဝ၁၆ခုနှစ်မှာ ထွက်ခွါခဲ့တဲ့ ဂနာဘရီဟာ ဝါဒါဘရီမင်မှာ ၂၇ပွဲကစား၊ ၁၁ဂိုး သွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ဘေယန်မြူးနစ်အသင်းရဲ့ ခေါ်ယူခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဘေယန်ကနေ ဟော့ဖင်ဟိမ်းကို ထပ်မံအငှားထွက်ကစားခဲ့ရပြီး အဲ့ဒီမှာလည်း ၂၆ပွဲကစား၊ ၁ဝဂိုး သွင်း ပြီးတဲ့နောက်မှာ သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကောင်းတွေကို ဘေယန်မြူးနစ်မှာ သက်သေပြခွင့် ရပါတော့တယ်။
ခုလက်ရှိအချိန်ထိ ဘေယန်မြူးနစ်အတွက် ၁၇၁ပွဲကစားပြီး ၆၄ဂိုး သွင်းယူပေးထားတဲ့ တောင်ပံကစားသမားဟာ ဘေယန်နဲ့အတူ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ၊ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားတွေ ရရှိခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ကာ အောင်မြင်တဲ့ A Class ကစားသမား ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။
အသက်အရွယ်ကလည်း ၂၆နှစ်သာရှိသေးသလို ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ရာသီကနေ အခုလက်ရှိ ၂ဝ၂၁-၂ဝ၂၂ ရာသီအထိ ၆ရာသီဆက် ရာသီတိုင်း ၁ဝဂိုးနဲ့အထက် သွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ တောင်ပံကစားသမားကို ဘေယန်အသင်းရဲ့ခေါ်စျေးက ပေါင် ၃၄သန်းတည်းပါ။ ဒါဟာ အာဆင်နယ်အသင်းမှာ ခြေစွမ်းမပြနိုင်လို့ လာမယ့်အပြောင်းအရွှေ့မှာ အထုပ်ပိုက်ပြီး လစ်ရတော့မယ့် စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေးရှင် ပေါင်သန်း ၇ဝတန် နီကိုလပ်စ်ပေပေရဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေးတစ်ဝက်စာတောင် မရှိတဲ့ ပမာဏပါ။ အာတီတာအတွက် ပေပေကို ရောင်းထုတ်ပြီးရင် ဂနာဘရီနဲ့ အစားထိုးဖို့ဆိုတာ ၂ခါစဥ်းစားစရာမလိုတဲ့ ကိစ္စပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခက်တာက အာဆင်နယ်ဟာ ယူရိုပါလိဂ်ပဲ ကစားရမှာဖြစ်တာကြောင့် ဂနာဘရီအတွက် အိုင်ကသေးပြီး ငါးကကြီးနေသလို ဖြစ်မှာ စိုးရတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဂနာဘရီက အာဆင်နယ်ရဲ့ ငယ်မွေးခြံပေါက်ကစားသမားဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ ပြန်ကာလို့ ရပါတယ်။ သူကြီးပြင်းခဲ့ရာ အာဆင်နယ်မှာ သူအခု သက်သေပြဖို့ အခွင့်အရေး ရပါပြီတဲ့၊ တခြားအသင်းတွေဆီကို ငွေကြေးနဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကြောင့်ပါဆိုပြီး ပြောင်းချင်ပါဦးမလား ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရပါမယ်။
အာဆင်နယ်ကလည်း သူ့ကို ငွေကြေးနဲ့ ဖြည့်ဆည်းဖို့ လိုပါမယ်။ စိန်ခေါ်မှုတွေကတော့ ဒီအသင်းမှာ အပြည့် ရှိနှင့်နေပါတယ်။ ဒီကိုပြန်လာခဲ့ရင် သူ့တောင်ပံနေရာအတွက် ဘူကာယိုဆာကာနဲ့ ယှဥ်ပြိုင်ရပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ဂနာဘရီအနေအထားနဲ့ဆို အသင်းမှာရှိတဲ့ တခြားတောင်ပံကစားသမားအားလုံးကြားထဲမှာ သူက စာသူငယ်ကြား ဠင်းတ နား သလို ထင်းနေမှာပါ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျွန်တော်တို့တွေ ဂနာဘရီကို မျှော်လင့်ကြလို့ ရပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်ရရင်တော့ ကျွန်တော်တို့တတွေ ပေပေနဲ့ ဆက်မသွားနိုင်တော့တာကြောင့် လူသစ်လိုပါတယ်။ အော်ဒီဂတ်နဲ့ တွဲကစားဖို့ လျှမ်းလျှမ်းတောက် တောင်ပံတွေ မြင်ချင်ပါတယ်။ ဆာကာ၊ စမစ်ရိုး၊ မာတင်နယ်လီတို့ကို လက်တွဲခေါ်ပေးမယ့် အတွေ့အကြုံရှိကစားသမားကို ခေါ်စေချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကစားသမားဟာ စျေးကွက်ထဲမှာ ရှိနေပြီး ဒီက ငယ်မွေးခြံပေါက်ပဲ ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီတစ်ယောက်ကရော ပြန်လာချင်ပါ့မလားဆိုတာကတော့ ဒီပုစ္ဆာမှာ အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်လာဖို့ရှိပါတယ်။
လက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့ ပထမဦးစားပေးနေရာအတွက် ရမ်ဒေးလ်ဟာ သူ့ကို ခြိမ်းခြောက်နေပြီလို့ ၀န်ခံခဲ့တဲ့ ပစ်ဖို့ဒ်